Imbali yeSelkirk Rex, iinyani kunye nobushushu - Ikati Ukufuya
Imbali yeSelkirk Rex, iinyani kunye nobushushu
Ikati yeSelkirk Rex yeyona feline ifanelekileyo yomntu ofuna iqabane elithambileyo elongezelekileyo lokuncanca naye. Ebizwa ngokuba 'yikati enxibe ufele lwegusha, iinwele zazo ezingaqhelekanga ezidibeneyo zikhatshwa kukuthamba nokuzola.
Imvelaphi yeSelkirk Rex Cat
Enye yezinto ezinomdla kolu luhlobo kukuba kuphela kohlobo lwekati oluthiywe ngegama lomntu, utata wesibini womfuyi wokuqala. Ikati yafunyanwa kwindawo ekhuselekileyo eMontana ngo-1987 kwaye uboya bayo obugobileyo yinto eyenzeka ngokwendalo. Le kati inenwele ezisonjiweyo yazalelwa kuyoumPersiukuvelisa amantshontsho eenwele amancinci kunye nophuhliso lohlobo lwaqala. I-Selkirk Rex yathathelwa ingqalelo nguMbutho weZizwe ngeeKati ngo-1994 uMbutho weeKati eziNcedisayo ngo-2000.
lithetha ntoni inani lam elilindelweyo losapho
Iindidi zeekati zasekhaya zaseLonghair
Iintsomi kunye neNyaniso malunga neekati eziMnyama
Umahluko phakathi kweSelkirk kunye nezinye iikati zeRex
Omnye umahluko ophambili phakathi kwezi ntlobo kukuba ufuzo lweenwele ezigobileyo zikaSelkirk lubalulekile. KwiiCornishkwayeUDevon Rexiintlobo uhlobo kubangela ukuba uboya babo obukhethekileyo bube ngaphezulu. Ngokwendlela emile ngayo emzimbeni, iSelkirk ikwisitokhwe kwaye ijikeleze kunezinye iintlobo ezimbini.
I-Selkirk Rex yeMpawu zoMzimba
ISelkirk ijongeka kakhulu njengeUBritish Shorthairikati, enomzimba onomzimba onethambo kunye nenentloko ejikelezileyo namehlo. Banendawo eyahlukileyo 'ethe tyaba' phakathi kweendlebe zabo phezulu kwentloko yabo. Uhlobo lunobunzima obuziitoni ezisithoba kuye kwali-16 kunye namadoda angaphezulu kwabafazi.
Ingubo yeSelkirk Rex
Olona phawu lubalaseleyo lweSelkirk Rex yingubo yabo egobileyo, enoboya kunye neentshebe zekrinki. ISelkirk Rex inokuza kuzo zombini iintlobo zeenwele ezimfutshane nezinde. Kuyenzeka ukuba inkunkuma ivelise iikati zineenwele ezithe nkqo. Idyasi yazo ingena malunga nayo yonke into umbala oqinileyo kunye nephethini , kubandakanya amanqaku, umthunzi, umsi, chinchilla, mink, sepia, van, bicolor, tabby, tortoiseshell, kunye necalico.
Ukuzilungisa iSelkirk Rex
Ayilulo uhlobo lokuphalaza olunzima kwaye idyasi yawo kulula ukuyinyamekela. Bayakufuna ikama yeveki ukugcina iinwele zabo zicocekile kwaye basuse nayiphi na imethi. Akufuneki ukuba zibrukwe njengoko oku kunokonakalisa ii-curls zazo ezinokuba krwada.
Ngaba iSelkirk Rex Hypoallergenic?
Akukho kati ikhoyo ngoku i-hypoallergenic kwaye i-Selkirk Rex ayikho ngaphandle. Bavelisa uhlobo olufanayo lwedander oluchaphazela abantu abanezigulo zee-aleji. Ikwangaba baphalazi abaphakathi ngokumiselweyo ke ayisiyonto ilungileyo ukuba iinwele zasekhaya zingumba kuwe.
Ubuntu bukaSelkirk Rex
Awunakufumana ukhetho olungcono kwikati yosapho kuneSelkirk Rex. Bakhululekile kwaye bayathoba kwaye bayathanda ukubanjwa kwaye bagxume nabantu babo. Babelungile abantwana kwaye nabantwana abancinci ukuba banolwazi ngendlela efanelekileyo yokujongana nekati. Banodumo lokuba basisiyatha kwaye bahlekise kwaye bayasebenza ngaphandle kokuba ne-hyper. Ngenxa yendalo yabo ekuhlaleni, abazenzi kakuhle bodwa kwaye babhangqwe kakuhle nelinye ikati okanye esinye isilwanyana esifana nenja ukuba uza kuhamba iiyure ezinde suku ngalunye.
Iingxaki zezeMpilo zeSelkirk Rex
I-Selkirk Rex inobomi obumalunga neminyaka eli-15. Ayaziwa ngokuba neemeko ezinzulu zempilo ezixhaphakileyo kolu hlobo. Kukho iimeko ezimbalwa zonyango ekufuneka uzijongile:
ngaba i-pittsburgh steelers ine-cheerleader
Hypertrophic cardiomyopathy(HCM) sisifo sezihlunu zentliziyo ezifumaneka kwiintlobo ezininzi zekati. I-HCM sisifo abavelisi abanoxanduva abaza kusikhusela ukuze singabikho kwiinkqubo zabo zokuzalela.
IPolycysticisifo sezintso(PKD) ikhokelela ekusileleni kwezintso ekugqibeleni njengoko ikati ifikelela kubudala obuphakathi ukuya ebudaleni. I-PKD sesinye isifo esiza kuvavanywa ngumfuyi olungileyo phambi kokuzala.
I-Hip dysplasia yimeko yokudibana ebuhlungu enokuthi ichaphazele i-Selkirk Rex kwaye iya isiba mandundu njengoko bekhula. Abafuyi kufuneka babe neekati zabo zixhotyiswe i-x-ray ngaphambi kokuzala ukukrola ngaphandle Ithuba le-hip dysplasia.
Iimeko zesikhumbazinokwenzeka ukuba uboya bazo abuhlanganiswanga rhoqo kwaye bugcinwe bucocekile. Kuya kufuneka ukuba ubahlambe ngeshampu ekhethekileyo ukugcina uboya babo bungafumani mafutha kunye namafutha.
Iingxaki zeendlebeikwangumbandela ngeSelkirk Rex ngenxa yoboya bazo oburhabaxa.
Ungayifumana phi iSelkirk Rex?
I-avareji yeendleko zekati kaSelkirk Rex imalunga $ 800 ukuya kwi-1,500 . Unokufumana abalimi ngokusebenzisa Umbutho wabaxhasi bekati kwaye i Umbutho weKat weHlabathi Imikhombandlela yabazalisi. Ukuhlangula i-Selkirk Rex kunokuba nzima njengoko iseyikati engaqhelekanga e-U.S. Unganxibelelana nabafuyi ukuze ubone ukuba baneekati ezindala ezifuna ukubekwa kwaye bandwendwele Uhlangulo lukaSelkirk Rex kunye nabafuyi abadla umhlala-phantsi Iphepha likaFacebook. Unokusebenzisa i Petfinder kwaye Yamkela-A-Pet iiwebhusayithi ukubakhangela kwiindawo zokufihla intloko kunye namaqela okuhlangula ikati kodwa baqonde ukuba kunokuba nzima kakhulu ukuyifumana.
Ngaba iSelkirk Rex ikati eyiyo yakho?
I-Selkirk Rex yikati ethandekayo, enoboya obunobuntu obufana nookhokho bayo basePersi abazolileyo. Luhlobo olukhulu lomntu ofuna ikati yentlalontle eyonwabela uthando kunye nokunxibelelana kodwa engazukuqhuba amakhonkco ejikeleze indlu. Bazakudinga ukuxhotyiswa ngengqondo kunye nohlobo oluthile lokudibana ukuba usebenza iiyure ezinde. Ayilulo ukhetho olufanelekileyo kwikati 'yodwa' echitha ixesha elininzi iyodwa.
Ukufa Kwinkcubeko Kuhlabathi Kwehlabathi Umtshato Ushishino Ikhekhe Decorating Slideshows Malunga Cocktails Ikhadi Making
Ukukhanya kwe-neon kwindawo yomzimba emnyama
uyonwabisa njani iboyfriend yakho
umbuzo wothando ukubuza umfana
indlela yokufumana imibimbi kwipolyester ngaphandle kwentsimbi
upholisa njani igumbi elinomlandeli
umnikelo wefanitshala ye-nyc yosuku olunye